Angel Di Maria oo ka hadlay isku dhaca Kylian Mbappe & Tababaraha Kooxda PSG ee Thomas Tuchel – Gool FM
Angel Di Maria oo ka hadlay isku dhaca Kylian Mbappe & Tababaraha Kooxda PSG ee Thomas Tuchel
Haaruun February 4, 2020
(Paris) 04 Feb 2020. Angel Di Maria ayaa ku dhaleeceeyay Kylian Mbappe qaabkii uu uga falceliyay markii la bedelay intii lagu jiray kulankii Kooxooda Paris Saint-Germain ay 5-0 kaga badisay Naadiga Montpellier Axaddii.
Mbappe ayaa dhaliyay goolkii afaraad ee PSG intii lagu jiray kulankaasi , laakiin wuxuu u muuqday mid aad u xanaaqsan markii uu tababare Thomas Tuchel badal ku sameeyay weerarayahankiisa reer France.
Xiddiga reer Argentina ee Di Maria oo la hadlayey Canal Plus ayaa yiri: “Aad ayey u adag tahay, qofna ma doonaynin inuu baxo, qof walba wuxuu doonayaa inuu ciyaaro, taasi waa iska caadi.”
“Kylian Mbappe wuxuu doonayaa inuu goolal dhaliyo, laakiin macallinka ayaa go’aansaday inuu badalo, waxaa jira xiddigo keydka fadhiya oo doonaya inay soo galaan kulanka si ay awood yeeshaan, wuxuu u baahan yahay inuu taas fahmo.”
Mbappe ayaa dhaliyay 14 gool oo horyaalka Ligue 1 ee France xilli ciyaareedkan 16 kulan oo uu saftay, kaliya Wissam Ben Yedder ayaa ah xiddiga kaga horeeya gool dhainta horyaalka.
PSG ayaa haatan 12 dhibcood ka sarreysa kooxda ku soo xigta ee Marseille, iyadoo 16 kulan laga ciyaaray horyaalka Ligue 1 xilli ciyaareedkan.
Liverpool oo lagu booriyay in ay iska iibiso Mohamed Salah si ay u soo qaadato....